Esi kwalite DirectX? Njehie: enweghi ike ibido mmemme ahụ, faịlụ d3dx9_33.dll na efu
Ndewo Taa na-emetụta ọkachamara. Ọtụtụ mgbe, karịsịa na kọmputa ọhụrụ (maọbụ mgbe ị nụghachiri Windows n'oge na-adịbeghị anya), mgbe ịmalite egwuregwu, enwere njehie dị ka "Usoro mmemme enweghị ike ịmalite n'ihi na kọmputa ahụ enweghị faịlụ d3dx9_33.dll. Gbalịa ịtinye ihe omume ahụ ..." (lee
Onye Nwee Obi Ọjọọ 2 Nkọgharị: nyochaa egwuregwu na nke mbụ
Nweghachi nke egwuregwu ndị a ma ama na-aghọ ezigbo ọdịnala nke studio Capcom. Onye mbido nke mbụ a gbanwere na nke na-enwe ihe ịga nke ọma na-akwụ ụgwọ na-egosi na nlọghachi na isi bụ ezigbo echiche. Ndị na-emepụta Japanese na-egbu nnụnụ abụọ na otu nkume n'otu oge, na-eme ka ndị na-ege ntị nwee mmasị na mbụ ma na-adọta ndị na-ege ntị ọhụrụ na usoro.
Paradaịs maka ndị na-agba chaa chaa: egwuregwu ndị kachasị elu na-egosi na Ngwá Ọrụ Tokyo Game 2018
N'isi isi obodo Japan, Tokyo Game Show egosiputala ọrụ ya - ihe ngosi kachasị elu nke ụlọ ọrụ egwu egwu nke rụpụtara site na ndị ọkà mmụta sayensị kọmputa si Land of the Rising Sun, Korea na China. Ihe omume ahụ mere ka e nwee oké mkpali: na ụbọchị anọ - site na September 20 rue Septemba 23 - ihe dị ka puku mmadụ atọ gara leta ngosi ahụ. Na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị ọbịa, ihe ngosi ahụ weere ihe ndekọ ya na ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa ọhụrụ.
Na uche nke ndị na-egwu kwa ọnwa free egwuregwu Ps Plus: na November 2018, nkesa nke egwuregwu nke ọnwa malitere. Na nchịkọta ọzọ nke ọtụtụ hits. E kwesịrị ilebara anya na onye na-agba shooter Bulletstorm na ihe nkiri Yakuza Kiwami. Egwuregwu Free Games maka PS Plus ndị debanyere aha na-apụta na November 2018 Egwuregwu maka PS 3 Jackbox Party Pack 2 Arkedo Series Games maka PS 4 Yakuza Kiwami Bulletstor: Full Clip Edition Burly Men At Sea Roundabout Free egwuregwu maka PS Plus ndị debanyere aha na-apụta na November 2018 November nchịkọta maka ndị debanyere aha PS Plus ga-egbo mkpa nke ọtụtụ egwuregwu.
Kedu otu esi meziwanye arụmọrụ egwuregwu (FPS) na NVIDIA?
Ezi ehihie Isiokwu a ga-adọrọ mmasị, nke mbụ, na ndị nwe NVIDIA kaadị vidiyo (ndị nwe ATI ma ọ bụ AMD ebe a) ... Ma eleghị anya, ọ bụrụ na ndị ọrụ kọmputa niile abịala na mgbachi na egwuregwu dị iche iche (ọbụlagodi, ndị malitere egwuregwu). Ihe mere maka brakes nwere ike ịdị iche: RAM ezughị ezu, iji kọmputa eme ihe nke ọma site na ngwa ndị ọzọ, arụmọrụ kaadị vidiyo obere, wdg ... Nke a bụ otu esi melite arụmọrụ a na egwuregwu na vidiyo vidio NVIDIA ma ga-amasị m ikwu okwu n'isiokwu a.
Top 10 egwuregwu kacha mma na PC na 2018
Enwere echiche na azụmahịa ọ bụla na-aghọ ihe na-atọ ụtọ ma ọ bụrụ na ị na-emeso ya na ụlọ ọrụ ndị enyi na ndị enyi. Ya mere, n'egwuregwu kọmputa: ọkpụkpọ nke otu egwuregwu nwere ike iyi ihe na-agwụ ike ma dị egwu, ma na arụmọrụ egwuregwu na-ekpughe na ụzọ ọhụrụ ma na-enye mmetụta uche na onye na-agbagha ndị na-eme egwuregwu.
Ekele ndị niile gụrụ akwụkwọ. Imirikiti egwuregwu kọmputa (ọbụna ndị nke pụtapụtara afọ 10 gara aga) kwadoro egwuregwu multiplayer: ma na Ịntanetị ma ọ bụ na netwọk mpaghara. Nke a, n'ezie, dị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụghị maka otu "ma" - n'ọtụtụ ọnọdụ ijikọta na ibe ọ bụla n'enweghị mmemme ndị ọzọ - agaghị arụ ọrụ.
Obodo ohuru ohuru ga - abia na Sid Meier si emepe ndi mmadu bi na VI
Mgbakwunye na-abịanụ ga-agbakwụnye na atụmatụ a ma ama maka mmepeanya nke Mali. N'oge na-adịbeghị anya, a mara ọkwa ndị na-eto eto nke Firaxis Games mba ọhụrụ. N'elu isi ala nke Mali ghọrọ otu n'ime ihe kachasi ike n'akụkọ ihe mere eme nke ndi ndu nke mba Afrika a, Mansa Musa. A na-ejikọta ego ndị mba ahụ na-acha ọlaedo na ala ịta ahịhịa.
Egwuregwu Braking na laptọọpụ, gịnị ka ị ga-eme?
Ekele ndị niile na-agụ akwụkwọ! Ndị na-egwu egwuregwu kọmputa n'oge a n'egwuregwu laptọọpụ, ee e, ee e, ha na-eche eziokwu ahụ na egwuregwu a ma ọ bụ egwuregwu ahụ ga-amalitelata. Ọtụtụ ndị mụ na ha ma ama na-ajụ m ajụjụ ndị a ọtụtụ mgbe. Na mgbe mgbe, ihe kpatara ya abughi ihe dị elu nke usoro egwuregwu ahụ, kama ọ bụ obere igbe igbe dị na ntọala ... N'isiokwu a, m ga-achọ ikwu maka isi ihe mere ha ji egbusi egwuregwu na laptọọpụ, yana inye ndụmọdụ ole na ole iji mee ngwa ngwa.
Sony na Microsoft enyewo ndị ọrụ ndebanye aha ọhụrụ maka egwuregwu ọhụrụ n'efu maka March 2019. Ọdịdị nke ikesa egwuregwu agaghị akwụsị, mana ndị mmepe nke mgbakọ na-eme mgbanwe maka usoro nkesa nke ọrụ n'efu. Ya mere, site na ọnwa ọhụrụ ahụ, Sony ga-ajụ ịnye egwuregwu maka consoles PlayStation 3 na PS Vita.
Olileanya maka December 2018: free egwuregwu maka PS Plus na Xbox Live Gold ndị debanyere aha
N'ọnwa ikpeazụ nke 2018, ndị nwe ụgwọ ndebanye ụgwọ ga-enweta ọrụ nke ụdị dị iche iche dị ka onyinye. December 2018 free egwuregwu na PS Plus na-agụnye shooter, arcade racing, egwu, na ihe nkiri anya akwụkwọ. Ndị nwe Xbox Live Gold nhọrọ ga-agụnye ihe mgbagwoju anya, omume, ihe efu na onye na-agba égbè.
Top 10 egwuregwu kachasị maka PC ndị na-adịghị ike
Egwuregwu oge a emewo ka nkà na ụzụ buru ibu na-aga n'ihu ma e jiri ya tụnyere ọrụ nke afọ ndị gara aga. Ebube nke ndịna-emeputa, mmegharị ahụ nke ọma, ọdịdị anụ ahụ na nnukwu oghere egwuregwu na-eme ka ndị egwuregwu nwee mmetụta nke imikpu n'ime ụwa ndị dị elu karịa ka ọ dị elu ma dị mma. N'eziokwu, obi ụtọ a na-achọ n'aka onye nwe kọmputa nke onwe ya.
Egwuregwu Olympic na Paris na 2024 ga-eme n'enweghị usoro ịntanetị
Azụmahịa eSports a ghọtara na ọtụtụ mba dịka egwuregwu egwuregwu agaghị apụta na 2024 Olympic. Kọmitii Olympic nke Mba Nile atụlewo ugboro ugboro na e-egwuregwu na ndepụta nke asọmpi nke egwuregwu Olympic. A na-atụ anya ọdịdị ya kacha nso dị na Summer Olympics na Paris, nke a ga-eme na 2024.
Kedu ka esi mee kaadị AMD dị (Ati Radeon)? Ịba ụba arụmọrụ FPS site na 10-20%
Ezi ụbọchị. N'ime otu n'ime isiokwu ndị gara aga, agwara m gị otu esi melite arụmọrụ na egwuregwu (nọmba nke okpokolo agba kwa FPS abụọ) site na ịhazi ntọala maka kalịnda vidio Nvidia. Ugbu a bụ oge AMD (Ati Radeon). Ọ dị mkpa iburu n'uche na ndụmọdụ ndị dị na isiokwu a ga-enyere aka mee kaadị vidio AMD na-enweghị ihe mgbochi, karịsịa n'ihi mbenata nke àgwà foto.
Nhọrọ nke egwuregwu free maka ndị debanyere aha PS Plus na Xbox Live Gold na February 2019
Xbox Live Gold na PlayStation Plus adịghị agbanwe omenala ha ma nọgide na-ekesa egwuregwu n'efu n'efu kwa ọnwa. Na February, ndị omempụ 2019 ga-enweta ọrụ 4 maka ikpo okwu site na Microsoft na utu aha isii nke Sony. Japanese studio ọkwa na ọnwa a ga-abụ onye ikpeazụ mgbe PS Plus na PS3 consoles egwuregwu ga-gụnyere na PS Plus.
A na-emepe atọ n'ime egwuregwu kachasị amasị na Steam na Asia na CIS
Ka ọ na-erule ngwụsị afọ 2018, ọrụ nke ndị mmepe Japanese na Ukrainia nọ n'elu atọ kachasị anya egwuregwu nke steam Steam. Onye nta akụkọ Britain bụ Simon Carless tweeted top three most anticipated users of games in the Steam store. Ọrụ Japanese-RPG site na ndị mmepe nke Mkpụrụ Obi Gbara Sekiro: Onyunyo Abụọ Iri Elu rutere elu.
Gosipụtara eziokwu na-awụ akpata oyi n'ahụ banyere egwuregwu Duck Hunt
Mgbe ụfọdụ, ndị mmadụ na-ekwu na "Ụwa bụ ụwa a na-amaghị ama," ebe ọ bụ Duck Hunt bụ egwuregwu a ma ama. Ònye ga-eche na n'ime egwuregwu 8-bit nke 1984, ọtụtụ mmadụ mara kemgbe ha bụ nwata na onye mbụ na-ere ahịa nke abụọ na ya n'elu ikpo okwu, enwere ike ịmebeghị ka e chee.
Egwuregwu Electronic gosipụtara otu narị izu nke otu izu FIFA 19
Ụlọ ọrụ Electronic Arts kwalitere otu izu nke izu FIFA 19 na nọmba XXII. Ịmepụta ihe ndị e mere maka ngwụcha izu ụka aghọwo ezigbo ọdịnala. Ihe ndị mejupụtara nke izu ụka XXII nke izu FIFA 19 Onye na-elekọta ụlọ Central na-agbachitere N'aka aka ekpe Nri aka ekpe Central midfielders Left winger Right winger Striker Spare part of XXII team of the week FIFA 19
Ndewo N'ọtụtụ ọnọdụ, ndị na-eme egwuregwu ga-ekpuchi kaadị vidiyo: ọ bụrụ na ọpụpụ na-aga nke ọma, mgbe ahụ, FPS (ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nkeji) abawanye. N'ihi nke a, foto dị na egwuregwu ahụ na-aghọ nwayọ, egwuregwu ahụ akwụsịlatalata, ọ na-adị jụụ ma na-atọ ụtọ igwu egwu. Mgbe ụfọdụ overclocking-enye gị ohere iwelie arụmọrụ ruo 30-35% (a ịrịba abawanye na-agbalị overclocking :))!
Ndị agha French nwere mmasị na egwuregwu kọmputa
Ụlọ ọrụ Nchebe nke France nyere otu nkwupụta banyere mmasị na egwuregwu kọmputa dị iche iche. Dị ka ndị nnọchianya nke ngalaba nchebe isi obodo nke mba ahụ, ọrụ ndị dịka WoW, LoL, PUBG, Fort na CS na-ezuru okè maka ịmụrụ ihe dị iche iche nke nkwurịta okwu n'etiti ndị egwuregwu. Ugbu a, ndị agha French na-achọ onye dịka onye nyocha na-amụ maka egwuregwu egwuregwu kọmputa, chọpụta atụmatụ nke nkwurịta okwu n'etiti ndị egwuregwu ma gbanwee ebe akparịta ụka na data netwọk maka ndị agha nke oge a.